အဆင့်မြင့် SMT နေရာချစက်များအတွက်သင့်တော်သောနေရာချထားမှုခေါင်းတစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
ကုမ္ပဏီများသည်အဆင့်မြင့်နေရာချထားရေးစက်များကိုရွေးချယ်သောအခါအခြေခံလိုအပ်ချက်သုံးခုမှာမြင့်မားသောနေရာချထားမှုတိကျမှု၊ အမြန်ဆုံးနေရာချထားမှုနှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ micro chip အစိတ်အပိုင်းနေရာချထားမှု၏တိကျမှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အလိုရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်သင့်တော်သောနေရာချထားမှု ...
နေရာချထားသည့်စက်သည်စက်ရုပ်စက်ရုပ်နှင့်တူညီသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်အာရုံခံကိရိယာများမှကူးစက်ပြီးအဓိက ဦး နှောက်မှဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ Topco Industries သည်နေရာချစက်တွင်အာရုံခံကိရိယာတစ်မျိုးမျိုးရှိသည်ကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပါလိမ့်မည်။ 1. ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ v အပါအဝင်အပါအဝင်နေရာချထားစက်, ...
SMT ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတည်ထောင်ခြင်းသည်စနစ်တကျစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ SMT ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုသည် SMT ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှု၊ မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုရရှိနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်းရှိမရှိတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညွှန်ကြားချက်များကိုမလိုက်နာပါ။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုပျက်စီးစေရုံသာမကသက်တမ်းကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ ဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နေရာချထားသည့်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
၁။ ဖန်သားပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း - ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းသည်ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် PCB ဂဟေဆက်ထားသည့်ဘားပြားအားဂဟေဆက်ကပ်ခြင်း (သို့) ကော်ကပ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာများမှာ SMT ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ရှေ့တန်းတွင်ရှိသောပိုးချည်ရိုက်စက် (မျက်နှာပုံနှိပ်စက်) ဖြစ်သည်။ ၂။ ကော်ဖြန့်ဝေခြင်း။
GUS - မျက်နှာဖုံးစက်၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကပ်ပါးများသည်“ စံ” နှင့်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဗျူဟာမြောက်အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့်အချို့ဒေသများ၌ပင်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားနည်းသည်။ ဒီ“ စစ်ကပ်ရောဂါ” မှာငါတို့ရောဂါကူးစက်မှုကိုအစောပိုင်းကရပ်တန့်စေနိုင်တယ်၊ အစောပိုင်းကလူတွေကိုကယ်တင်နိုင်တယ်။
ရိုးရာဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 5G သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးမြင်ကွင်းများနှင့်ဂေဟဗေဒအသစ်ကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည်အသိဉာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုကိုအသွင်ပြောင်းရာတွင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အတွက်ရိုးရာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီနိုင်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။
20-10-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
1. တစ်ခုတည်းခြမ်းစည်းဝေးပွဲကို: ဝင်လာသောစစ်ဆေးရေး => ပိုး - မျက်နှာပြင်ဂဟေဆော်သောငါးပိ (အစက်အပြောက် patch ကိုကော်) => patch ကို => ခြောက်သွေ့ (ကုသ) => reflow ဂဟေ => သန့်ရှင်းရေး => စစ်ဆေးရေး => ပြုပြင် 2. နှစ်ဖက် - စည်းဝေးပွဲကို: : အဝင်စစ်ဆေးခြင်း => PCB ဘက်မှပိုးသားမျက်နှာပြင်ပါဂဟေဆက်ထားသောငါးပိ။